यसरी बनाउ हाम्रो एनआरएनएलाई राम्रो | We Nepali
नेपालको समय: ०२:३८ | UK Time: 20:53
यसरी बनाउ हाम्रो एनआरएनएलाई राम्रो
२०७६ भदौ ९ गते २३:०७
लन्डन । आज भन्दा करीव १६ बर्षअघि बेलायतबाट स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् बालिक भएको छ ।
नेपालमा जन्म भएपनि विभिन्न कारण प्रवास हिडेका सवै नेपालीका साझा संस्थाका रुपमा विकास गर्न स्थापित संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ ‘एनआरएनए’ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् सुरुवाती दिन ठिक बाटो थियो । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र मह्तोदेखि वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टसम्म आईपुग्दा समय कालखण्डमा चुनौती फेरीएका छन् ।
यसवीचमा एनआरएनएले नेपाल सरकारबाट औपचारिक रुपमै वैधानिकता प्राप्त गरेको छ । एनआरएनए पनि औचापरिक रुपमा नेपालमा दर्ता भै नेपालीका लागि काम गर्न गैरआवासीय नेपालीका संस्था हो भन्ने परिचय दिन सफल भएको छ ।
खासगरी सन् २०१५ मा नेपाल गएको विनासकारी भूकम्प र पुनर्निमाणमा गैरआवासीय नेपालीले गरेका आर्थिक र सामाजिक कार्य सवैले गर्व गर्न लायक बन्यो त्यो नै हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । लाप्राक बस्ती निर्माण अन्तिम चरणका काम भैरहेको छ, शंखमूल पार्क, गैरआवासीय नेपाली संघको आफ्नै भवन जस्ता कार्यले गैरआवासीय नेपाल साँच्चै नेपालको विकासमा हातेमालो गर्न चाहान्छन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको भैसकेको छ ।
नेपालमा विगतको जस्तो अस्थिर सरकार होइन, स्थायी सरकार बनिसकेको छ । स्थायी सरकारले लिएका नीतिहरु अव कम्तीमा पाँच बर्षसम्म रहने देखिन्छ । हामीले अव जन्मभूमिका बिषयमा ठोस काम गरेर देखाउने दिन आइसकेको छ ।
विकसित मुलुकहरु बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानाडालगायत ठाउँमा हामीले बस्दा अनुभव गरेका सीप र दक्षता अव नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ । उमेर र क्षमता अनुसार हामीले प्राप्त गरेको सीप अव नेपालको तीव्र विकासमा लगानु पर्नेछ । बर्षायाममा हरेक बर्ष बाढी जान्छ, पूल भत्कन्छ । शहरका सडकमा पानी निकास नभएर वालकालिकाको खाडलमा परेर असमायिक मृत्यू हुने गरेको छ । यस्ता कुरा रोक्न यहाँ कुन प्रविधिबाट पूल बनाइन्छ ? बाटो कसरी सधै चिल्ला र राम्रा हुन्छन् ? सडक बनाउन हाल्नुपर्ने ढुंगा वा रोडाका मात्रा कति र कसरी दरिलो बनाउन सकिन्छ ? यस्ता प्राविधिक ज्ञान हामी नेपाली इन्जिनियरले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अवस्था अव एनआरएनएले गर्नुपर्छ ।
अस्पतालमा भिड हुन नदिन कसरी जेनरल प्राक्टिक्सनरले सामान्य चेक जाँच गरेपछि मात्र अस्तापल जाने बाटो खुल्छ त्यो अवस्था नेपालमा पुर्याउनु पर्छ । हाम्रो देशका कतिपय भूगोलमा अहिलेसम्म सिटामोल खाने अवस्था छैन । त्यस्तो ठाउँमा योजना लगेर विकट स्थानमा एक प्रदेश एक एनआरएनए अस्पतालको अवधारणा लग्नुपर्छ ।
विकसित देशमा अध्ययन गरेका बालबालिका आफ्ना कुरा निर्धक्कसँग राख्छन् । स्वयं आत्माविश्वास हुने खालेका प्राविधिक शिक्षा भित्र्याउन सहयोग गर्नुपर्छ । जसले विश्वभरका मानिससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस । त्यस्तै, औपचारिक शिक्षामा अल्झिएको नेपाली शिक्षालाई व्यवसायी बनाउन एनआरएनएले नै पहल गर्नुपर्छ । कम्तिमा दुई बर्षमा एक प्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा अघि सारियो भने १४ बर्षमा सातै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालय खुल्छन । जस्तो बेरोजगारी समस्या हटाई रोजगार निर्माण गर्छ ।
दैनिक सवारी दुर्घटनाबाट सयौं मानिसको मृत्यू हुने गरेको छ । जसका कारण टुहुरा धेरै बालकालिका लालनपालनमा समस्या देखिएको छ । बेलायतमा हरेक बर्ष अनिवार्य प्राविधिक सवारी चेकजाँच गरिए जस्तै सवारी रोडमा चल्न योग्य हुनुपर्ने नियम बनायौं भने स्वत दुर्घटना नियन्त्रण हुन्छ ।
रोड सेप्टीकालागि बाटोका लेनहरु स्पष्ट रंग लगाउने, सवारी गति तोक्ने र अनियन्त्रित सवारी हाक्नेलाई कारवाही गर्ने नीति ल्याउने हो भने अनाहकमा हुने मृत्यू तत्काल नियन्त्रण हुने देखिन्छ । यस्ता कुराहरुलाई हामीले कायान्वयनमा लग्न सकियो भने नेपालीमा एनआरएनएप्रतिको बुझाई देख्न सजिलै सकिन्छ ।
त्यसवाहेक, हामीले थोरै लगानीबाट पनि धेरै उपलव्धी हात पार्न सक्छौं । वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टका भनाईलाई सापट लिने हो भने ‘सवैको हात एकैसाथ’ यस्ता सकारात्मक कुराले मातृभूमिमा लगानी गर्न सवैलाई एकै ठाउँमा उभ्याउँछ । एक प्रवासी नेपाली सँग कम्तीमा एक डलर लगानी गर । एनआरएनएले यस आयोजना अघि बढाउँछ भन्ने हो भने स्वत ठुलो धनरासीको लगानी गर्न हामी सक्षम हुन्छौ ।
सीप, दक्षता, ज्ञान र अनुभव जस्ता कुराहरु जत्ति खर्च गर्यो उति फैलिएर जान्छ । गैरआवासीय नेपालीले कुरा गरे जत्ति काम गर्न सकेका छैनांै । जसका कारण हामी प्रत्ति स्वदेशी नेपालीहरु सकारात्मक हुन सकेका छैनौ । यसलाई चिर्ने भनेको हामीले कामबाटै हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्र्यि समन्वय परिषद्ले हरेक बर्ष बिषयगत समिति बनाउने गरेको छ । तर, ति समितिका सदस्यहरु एक पटक पनि वैठक बस्न सकेको छैन । नेपालमा जाने र नेता भेट्नका लागि समिति बनाइएको जस्ता भान हुन थालेको छ । जे जति समितिहरु बनाइन्छन ति सवैलाई चलायमान बनाऔं । काम गरौं, हामी विदेशका रहेका प्रवासी नेपालीहरु मेहनति भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । अव पालो डेलिभर गर्ने बेला आएको छ । हामीले हाम्रालागि धेरै गयौं, अव मातृभूमिका लागि केही गरौं र हाम्रो एनआरएनए राम्रो एनआरएन बनाऔं सबैमा अनुरोध ।
(लेखक अधिकारीले एनआरएनए आईसिसि सचिव पदका उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् )